चटपटे मकै चाख्न मन छ, यसरी बनाउनुहोस् ? – Jagaran Nepal
चटपटे मकै चाख्न मन छ, यसरी बनाउनुहोस् ?
काठमाडौं – मकै नेपालको मुख्य अन्नबालीमा पर्दछ । मकै जति मिठो हुन्छ त्यती नै फाइदा पनि छन् । यसको सेबनले हाम्रो शरिरलाई पनि धेरै नै फाइदा गर्छ । मकैमा प्रशस्त मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ ।
मकैमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर पाइन्छ । जसले पाचन प्रक्रियालाई सन्तुलित बनाउँछ । नियमित मकै खाने मानिसमा एसिडिटी र कब्जियतको समस्या हुँदैन । मकैले कोलस्ट्रोलको मात्रालाई नियन्त्रण गर्नुका साथै मुटुरोगको सम्भावनासमेत कम गर्छ ।
मकैमा फोलिक एसिड पर्याप्त मात्रामा हुने भएकाले गर्भवती महिलाका लागि यो फाइदाजनक मानिन्छ । मकैमा एन्टिअक्सिडेन्टको मात्रा प्रशस्त हुन्छ । त्यस्तै, छाला स्वस्थ राख्नुका साथै रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ । पोलेको मकै खाँदा हड्डी बलियो हुन्छ । यसमा कपर, म्याग्नेसियम, आइरन र फोस्फोरसको मात्रासमेत पाइन्छ, यी हड्डीका लागि फाइदाजनक तत्व हुन् । भुटेको र पोलेको मकैमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रासमेत उच्च हुने हुँदा यसले शरीरमा ऊर्जा प्रदान गर्छ ।
यसको सेबनले बढ्दो उमेरको लक्षणलाई रोक्छ । मकैको सेबनले क्यान्सरसँग लड्न सहयोग पुर्याउछ । मकै खाने गरेमा दाँत पनि बलियो हुन्छ । मकै बच्चाहरुको लागी पनि फाइदाजनक छ ।
यसको सेबनले बच्चाको शारीरिक र मानसिक विकास हुन्छ । पोलेको मकैले मुटुलाई पनि फाइदा गर्छ । भुटेको मकैमा फाइबर हुनाले यसले शरीरभित्र ब्लड सुगरमा राम्रो प्रभाव पार्छ । मकै खाइसकेपछि त्यसको खोयालाई भाँचेर सुँघ्दा वा सुकाएर जलाएको धुँवाले रुघाखोकी निको हुन्छ ।
मकैलाई विभिन्न परिकार जस्तै भुटेर, उसिनेर, पोलेर, चटपटे र च्याख्ला बनाएर खान सकिन्छ । चटपटे मकै धेरैजसोलाई मनपर्ने परिकार हो । यदि तपाइलाई पनि यो परिकार चाख्न मा छ भने यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ ।
चटपटे मकै बनाउने बिधि
सुरुमा हरियो मकैलाई उसिनेर छोडाउने
त्यसपछि कराइमा तेल हाल्ने, तेल तातेपछि लसुन र अदुवा फुराउने
लसुन अदुवा एकछिन पकाएर उसिनेर छोडाएको मकै हाल्ने
मकै हालेपछि त्यसमा खुर्सानि, नुन र चाट मसला हाल्ने
केहि मिनेट त्यसलाई चलाउने अनि निकाल्ने
अलिकति प्याज टमाटर कागती र धनिया हालेर पस्कने
यसरी बनाएको मकैको चटपट एकदमै स्वादिष्ट र स्वस्थ्यकर बन्छ ।
यो खानुका फाइदा
फाइबरयुक्त अन्न, मधुमेह र मुटुरोगिको लागी उपयुक्त खाजा
प्रशस्त भिटामिन र मिनरल्स पाइने
(सोचाईको फेसबुक पेजबाट साभार)